Depiote Raholijaona Harson : Miaraka amin’ny vahoaka -
AccueilSongandinaDepiote Raholijaona Harson : Miaraka amin’ny vahoaka
Depiote Raholijaona Harson : Miaraka amin’ny vahoaka
Mifanesika sy mifanitsa-kitro ny fanohanana ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, amin’izao fotoana hiatrehana ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena izao.
Anisan’izany ny depiote voafidy tao amin’ny distrikan’i Tsiroanomandidy, Faritra Bongolava, Raholijaona Harson. Solombavambahoaka avy amin’ny Andrin’i Madagasikara, ary nisafidy ny hanohana ny kandidà Marc Ravalomanana amin’ity fihodinana faharoa, izay tanterahina ny 19 desambra izao ity.
Nambaran’ity solombavambahoaka ity fa « miaraka amin’ny vahoaka » ny tenany. Noho izany, ny vahoaka, hoy izy, manaraka ny kandidà laharana faha-25, ary ny tenany dia vahoaka, ary ny vahoaka no naha-depiote azy. Araka izany, notsindriany fa tsy afaka ny hamitaka ny vahoaka nifidy azy tao amin’ny distrikan’i Tsiroanomandidy mihitsy ny solombavambahoaka Raholijaona Harson. « Amin’ny fomba ahoana moa no hanadinoako sy tsy hiarahako amin’ny vahoaka. Izy ireo no nifidy ahy hitondra ny teniny eo anivon’ny Fanjakana, noho izany miaraka amin’izy ireo aho. Ny vahoaka nanaraka ny kandidà laharana faha-25, noho izany koa, manaraka ary manohana io kandidà io ny tenako », hoy hatrany ny depiote Raholijaona Harson.
Ankoatra izay, raha ny mahakasika ny fanohanany ny kandidà Marc Ravalomanana indray, mazava ny teny nolazainy fa efa manana stratejia hampandaniana ny kandidà tohanany izy. Nambarany fa raha manodidina ny 10 000 mahery no latsa-bato azon’ny kandidà Marc Ravalomanana tamin’ny fihodinana voalohany, mampanantena ity solombavambahoakan’i Tsiroanomandidy ity fa hampakatra izany ho 20 000 hatrany amin’ny 30 000 latsa-bato.
Etsy andaniny, mahakasika ny fandaharan’asan’i Marc Ravalomanana, nilaza ny depiote Raholijaona Harson fa maharesy lahatra ary mahavelom-panantenana tanteraka ny « Manifesto » sy ny MAP II. Anisan’ny nahasarika ity solombavambahoaka ity ireo tetikasan’i Marc Ravalomanana, ka nanosika azy ho amin’ny fanohanana tsy am-pihambahambana. « Tsara loatra ny tetikasa ho fitsinjovana ny vahoaka. Tetikasa tsy tia tena fa mizara ahafaha-mampandroso. Tsy misy afa-tsy ny tetikasan’ny kandidà Marc Ravalomanana ihany anefa no maharesy lahatra sy ahafahana manantena amin’ny fampivoarana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka », hoy ny depiote Raholijaona Harson.